Feon-kira am-bava :: Hasaina hanolotra seho ny mpandresin’ny « Beatbox battle » • AoRaha
Feon-kira am-bava Hasaina hanolotra seho ny mpandresin’ny « Beatbox battle »
Tsy fahita firy. Hanolotra fampisehoana rano iray ireo mpahay feon-kira am-bava, amin’ny 15 febroary ho avy izao, etsy amin’ny Cercle Germano malagasy (CGM/Gz) Analakely. Handray anjara amin’izany ireo tanora vao misandratra sy ireo mpandresin’ny fifaninanana « Beatbox Battle », vao avy notanterahina tamin’ny volana aogositra 2019 tetsy amin’ny CRAAM Ankatso. Ilay mpahay feon-kira am-bava, Do B sy ny Beatbox Madagasikara no mifarimbona amin’ny fanatontosana hahatontosana ity seho ity.
Matetika no miaraka amina seho hafa foana ireo mpahay feon-kira am-bava. Ny fiarahana eny ambony lampihazo amin’ny « Acapella » no hahitana azy ireo. Io sehatra io rahateo no manome vahana azy satria ny iray fihirana tsy misy feon-kira ary ny iray feon-kira am-bava. Hatramin’ny nidiran’ity kolontsaina ity teto Madagasikara, dia tsy mbola nanana sehatra malalaka hivelarany izy.
Hasehon-dry Do Be, Feo, King of Voice, CTS, Andry, Moignon, Mihaja, Iriantsoa ry Fitahiana fa afaka misehatra mitokana tsara mihitsy ny mpahay feon-kira am-bava. Hirindra toy ny fampisehoana mahazatra ny besinimaro izany. Tanjona ny hanomezana lanja ny « beatbox » eto Madagasikara.
Famoronan-kira Nampihetsika ny aingam-panahin’ireo artista sasany ny fihibohana
Fialam-boly sy vaky boky Onjam-peo dimampolo handefa tantara ho an’ny ankizy isan’andro
Famoahana hira Manolotra ny « Lapa vaovao » i Mamina
Famoronana haifitafy :: Hanolotra ireo talenta miafin’ny lamaody ny “Mihamy Mada Fashion”
Fampiroborobona ny kolontsaina :: Misy fampifangaroana andraikitra eo amin’ireo mpisehatra ara-javakanto